निर्वाचन बेमौसमको बाजा हो, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ | GNN Nepal GNN Nepal निर्वाचन बेमौसमको बाजा हो, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ | GNN Nepal
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ । त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ : प्रकाश रसाईली, स्नेही
देश कता जाँदैछ ?
आज नेपाली जनता हरेक किसिमले मर्माहत छन् । हरेक नेपालीले कतिबेला के हुन्छ भनेर हातमा कात्रो लिएर बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई खोपभन्दा निर्वाचनको भारी बोकाउन खोजिरहेका छन् । संविधान र ऐन नै मिचेर आफू जसरी भएपनि सत्तामा टिकिरहने यो हठीले आम नागरिकलाई सास्ती दिएको छ ।
बहुमत सरकारको दाबीका लागि तपाईहरुले राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएको हस्ताक्षर किर्ते थियो भन्ने आरोप छ नि…
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले घरसल्लाह गरेर त्यो हस्ताक्षर किर्ते गर्नुभएको हो । हामी त १४६ जना भौतिक रुपमै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइसकेका छौं । यदि उहाँसँग १५३ जना नै थिए भने खै त उहाँ अदालतमा आएर उपस्थित हुनुभएको रु केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री होइनन् उनी किर्ते र अवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन् । उनलाई त विद्या भण्डारी बाहेक अरुले प्रधानमन्त्री मानेका छैनन् ।
विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गर्नुभएको छ । उहाँ जनताको राष्ट्रपति नभएर एउटा पार्टीको, पार्टीमा पनि गुटको, गुटमा पनि एउटा व्यक्तिको उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको छ । अबको हाम्रो यात्रा केपी ओलीविरुद्ध मात्र होइन विद्यादेवी भण्डारीका विरुद्धमा पनि हो ।
जनता निषेधाज्ञामा छन् । तपाईहरु जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रतिनिधिहरु हो । तर यतिबेला तपाईहरु सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लिप्त हुनुहुन्छ !
संविधान जोगाउन, आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ । हामीले जनताका लागि राजनीति गर्ने हो । जनता नै नरहे केको राजनीति ? त्यसैले पहिले जनतालाई बचाउ । जहाँसम्म हाम्रो सन्दर्भ छ हामीले कहिल्यै पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरेका छैनौ । हाम्रो मुख्य एजेन्डा जनताको सुरक्षा हो । हामी जनतालाई कसरी हुन्छ यो महामारीबाट जोगाउने तयारीमा छौं । अहिले जनताले अस्पतालमा बेड पाएका छैनन् । जनता बचाउन अग्रसर नहुने सरकारले सत्तामा बस्न सुहाउँदैन ।
यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर सोझिएको छ । तपाईहरु त प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको विकल्प नै छैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ होला । यदि त्यसो भएन भने त्यसपछि के गर्ने तयारी छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक अदालतको पनि मानहानी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पूर्णपाठ नआउँदै किर्ते र जाल साँजी गरेर फेरि यसलाई विघटन गरियो । त्यत्रो लगानी गरेर निर्माण गरिएको संविधान आज विद्या भण्डारी र केपी ओलीका कारण समाप्त हुँदैछ ।
यतिबेला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसबारेमा बहसहरु भइरहेका छन् । हामीले प्रभावित हुनेगरि कुनैपनि अभिव्यक्तिहरु दिन मिल्दैन । तर सत्य के भने प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ ।
अबको राजनीतिक निकास के हो ?
प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ । त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ । अनि हामी जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन्छौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौं । यतिबेला निर्वाचन बेमौसमको बाजा मात्र हो । यो सम्भव छैन ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सोमबार बस्ने
चैत ८ गते, २०७७
भारतमा एकै दिन थपिए डेढ लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित